Oko kufunyaniswa zizilwanyana zakho zasekhaya ngaphambi kokuba uyazi | Bezzia
Oko kubonwa zizilwanyana zasekhaya ngaphambi kokuba uyazi
USusana godoy | | Mascotas
Ngaba uyazi yonke into efunyenwe zizilwanyana zasekhaya? Kungenxa yokuba akwenzeki ngamabona-ndenzile ukuba kwiimeko ezithile aziphathe ngendlela eyahlukileyo kunesiqhelo. Kubonakala ngathi izifo ezininzi ziyawavumba. Sazi kakuhle ukuba ivumba lolunye lweempawu ezintle ezinazo izilwanyana zasekhaya, ke ukusuka apho kuphuma ezona zibalaseleyo.
Kaloku kunyanisiwe ukuba sithe izifo ziyabhaqwa kodwa azisoloko zibonwa. Kwezinye iimeko nazo ziya kuba ziindaba ezilungileyo, ukuze ulinde ukuva kwaye iya kuba sisilwanyana sakho sasekhaya esinokukwazisa ngaso. Ngoku kuya kufuneka unikele ingqalelo ngakumbi kunangaphambili kuzo zonke iintshukumo zabo!
1 Yintoni ebonwa zizilwanyana zakho zasekhaya: Umhlaza weProstate
4 Imozulu iyatshintsha
5 Umoya wakho
Yintoni ebonwa zizilwanyana zakho zasekhaya: Umhlaza weProstate
Liyinyaniso elokuba ngumbandela ontsonkothileyo apho zikhoyo. Kodwa kubonakala ngathi kukho izifundo eziyalela ukuba izilwanyana zasekhaya zisevumba esi sifo ngaphambi kokuba umntu azi ngobukho baso. Oku Kubangelwa kukukhula kwezivamvo zokujoja okuyiloo nto inokubona ukuba kukho into eyenzekayo ngamathe okanye ngokubila. Nangona iluncedo kwiintlobo ezininzi zomhlaza, yinyani ukuba enye yezinja ziyifumana kakuhle ngumhlaza wedlala lesidoda. Banepesenti encinci yempazamo kwizilwanyana.
Besele sihambela phambili ukuba ayizizo zonke eziya kuba ziindaba ezimbi. Ke, zikwayizilwanyana zasekhaya ziya kwazi ukuba ilungu elitsha lizakuba sekhaya kungekudala. Oku kufana nemeko yangaphambili, kuba ngenxa yevumba labo uyakwazi ukubona utshintsho lwehomoni. Ngenxa yoko, mhlawumbi uyazi ngexesha elinye nawe okanye kwangaphambilana nje. Ke uya kuhlala esazi kakhulu ngathi kuba ubomi obutsha bubekwe kuwe kwaye ngokunjalo, uya kufuna nokubukhusela kwasekuqaleni.
Kukho iimeko zeekati kunye nezinja ezinokubona ukufa. Kubonakala ngathi kwiminyaka embalwa edlulileyo, yafunyanwa ikati eyayisazi ukuba abantu abadala baya kufa nini kwaye iza kungqiyama kubo kungekudala ngaphambi kokuba kufike ixesha. Kuyinyani ukuba ngalo lonke ixesha isilo-qabane sethu silala oko akuthethi ukuba kukho into eza kwenzeka, kodwa oko kuthetha ukuba kwiimeko ezithile sinokunuka. Ngoku siza kuzama ukuba singazicingeli ngenxa yokuba isilwanyana sethu sasekhaya asinakubekwa tyala ngokuba nolu thotho lwamandla alwenza lube lukhethekileyo ngakumbi.
Olona tshintsho lwemozulu lubalulekileyo olufana nokufika kwezaqhwithi okanye iinkanyamba ziphakathi kokhetho olunokuthi lubonwe zizilwanyana zasekhaya. Kuba baphawula ukuba kuza iinguqulelo yaye ekugqibeleni bakhokelela kwezo zikhankanyiweyo. Inja iya kubonakala isoyika kakhulu phambi kokuba isiphango sibethe. kwaye aliyi kuyeka ukusuka kwelinye icala ukuya kwelinye. Kakade ke, isilwanyana sakho sasekhaya sinokuba nolunye uhlobo lokuziphatha. Kuba njengomthetho jikelele iya kuba yinto eboyikisayo kwaye ngenxa yoko banokuba neendlela ezahlukeneyo zokuziphatha.
Ngokutsho kwethu siyakwazi ukuba isilwanyana sethu sinjani na, ngakumbi kwaye ngcono indlela esiziva ngayo. Ukuba udakumbile okanye unxunguphele baya kuyazi loo nto kwaye abayi kukushiya wedwa okanye wedwa. Kuba yenye yeendlela ezilungileyo abamele bakubonise ngazo uthando lwabo. Ke, le nkampani ihlala iyenye yezona zinto zithembekileyo kwaye ziyimfuneko ebomini bethu.
Kwakhona kufuneka sitsho ezi ntlobo zohlaselo zidityaniswe nevumba kakhulu uphawu ukuba zizilwanyana zasekhaya kuphela ezinokuyibona ngaphambi kokuba yenzeke. Ke isoloko isilumkiso esilungileyo ukwazi ukuba kuya kwenzeka nini ukuthintela ukuwa kwaye ukuze umntu alumkiswe ngaphambi kokuba uhlaselo lufike. Ngaba uyazi yonke into efunyenwe zizilwanyana zasekhaya? Ngoku ngokuqinisekileyo uya kuba nomdla ngakumbi okanye unikele ingqalelo kuzo zonke iintshukumo zabo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ikhaya » Mascotas » Oko kubonwa zizilwanyana zasekhaya ngaphambi kokuba uyazi
Thatha inzuzo yeentengiso zePikolinos, tyala imali kwintuthuzelo
Iimaski zokuvuselela i-contour yamehlo